यी ४ बार जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् सबै भन्दा भाग्यमानी ! – Enepali News
August 29, 2020 224
मानिसको जन्मबार र समयबाट भविष्यवाणी हेर्न गर्छन्, कतिपयलाइ धार्मिक विश्वास हुन्छ भने कतिपयले बिश्वास गर्दैनन्। आफू जन्मेको बारको ग्रहको प्रभाव जीवनभर रहन्छन भन्ने धार्मिक शास्त्रमा उलेखित गरिएकाे छ।
आइतबारको दिन सूर्य, सोमवारको मुख्य ग्रह चन्द्र, मंगलवार मंगल, बुधवार बुधको प्रभाव, विहीबार वृहस्पति, शुक्रवार शुक्रको प्रभाव सबै भन्दा बढी, शनिवारको कारक ग्रह शनि मानिन्छ ।
तपाईको आयआर्जनमा यी ग्रहहरुले प्रभाव पार्ने गर्छन। आज हामी तपाईहरुलाई कुन बार जन्मेकाले कति सम्पति कमाउन सक्छन भन्ने विषयमा बताउन जाँदै छौँ।
आईतबार: यसबार जन्मिने व्यक्ति निकै भाग्यमानी हुन्छन् र आयु पनि लामो हुन्छ । कम बोल्ने र शिक्षामा अगाडी हुन्छन्, धार्मिक आस्था पनि हुन्छ र घर परिवारका सदस्यलाई खुशी राख्न खाेज्छन् । आइतबार जन्मिने महिला दान-पुण्य गर्ने र चलाख हुनेछन्। यिनीहरुको बढी रिसाउने बानी भएपनि धेरै मान्छेहरुको विश्वासको पात्र मानिने गर्छन् र धेरै जसो प्रेम विवाह गर्ने गर्दछन्।
सोमबार : यी व्यक्तिहरुमा स्मरण तेज एकदमै बढी हुने गर्छ। बाेली निकै राम्राे हुने र जीवनमा उनीहरुलाई दुःख सुख उस्तै उस्तै लाग्छ । सोमबार जन्मिने व्यक्ति विध्वान, कला कुशल र बहादुर पनि हुन्छन् । यस दिन जन्मेका पुरुषहरु निकै माया गर्ने स्वभावका हुन्छन् तर अलि लोभी हुने भएका कारण उनीहरुले प्रायजसो आफ्नी श्रीमतीको गाली सुन्नुपर्ने हुन्छ ।
बिहिवार: यस निकै मेधावी, शान्त र समझदार हुने, विध्वान र पराक्रमी पनि हुने गर्छन् । ३० वर्ष उमेर नाघे पछि भाग्य खुल्ने र सोचेभन्दा बढी धन सम्पति कमाउने छन् । बिहिबार जन्मेका व्यक्तिहरु धेरै पैसा कमाउने गर्दछन् र मन खोलेर खर्च पनि गर्छन् । यी व्यक्तिले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि उच्च पद हाँसिल गर्ने छन् ।
शुक्रबार : मन, दिमाग र शरिर निकै राम्रो हुन्छ र निकै रोमान्चक स्वभावका हुन्छ। मिठो स्वरले सबैको मन जित्ने गर्छन। २० र २४ वर्षको उमेर मा दुख कष्ट पर्ने भएपनि आफ्नो कडा मेहेनत र परिश्रमको बावजुद प्रशस्त धन आर्जन गर्न सक्छन। शुक्रबार जन्म भएका व्यक्तिहरुले गरेका हरेक कामको नतिजा ढिलो आउने भएपनि सकारात्मक हुने गर्छ।
Nextएका बिहानै पाथिभरा माताको दर्शन गर्दै भाद्र १८ गते बिहिबारको को राशिफल पढ्नुहोस
आजको राशिफल; मिति २०७७ साल असार ४ गते बिहिवार,
कोरोना भाइरस मुख र नाकबाट मात्रै हैन कानबाट पनि सर्छ !
सिन्धुली खुर्कोटकी इन्सपेक्टर शान्ता वाइबाको लोभलाग्दो काम ! सयौ मजदुरको उद्दार (1360)